ကျန်းမာသောစိုက်ထူခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ဤသည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးသည်လူက Post ဖြစ်ပါတယ်
ကျန်းမာသောအမျိုးသားအများစုသည်မနက်ခင်းတွင်ထမြောက်ခြင်းဖြင့်အိပ်ကြသည်။ “ နံနက်သစ်” နှင့်“ နံနက်တဲ” ဟူသောစကားလုံးသည်ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများသည်သူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ညကိုစိုက်ထူထားကြသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူတို့နိုးထပြီးသူတို့စိုက်ထူနေဆဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဒီဟာကောင်းတယ် ဒါကကျန်းမာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ အားလုံးမကြာခဏဖြစ်လျှင်ဤသည်ငါ့ထံသို့မကြာခဏဖြစ်ပျက်မခံခဲ့ရပါဘူး ယခုအိပ်စက်ခြင်းသည်ညတိုင်းကြိမ်ဖန်များစွာအိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ငါကနည်းနည်းပဲလို့ထင်တယ် ကျော်လွန် ကျန်းမာ, ငါ့စိုက်ထူငါ့ကိုနှိုးနဲ့ဒါဟာငါ့ကိုယ်ကိုဆင်းငြိမ်သက်ဖို့ကျွန်မကိုခဏကြာလို့ပဲ။ ငါနိုးထလာသောအခါတိုကျတှနျးထားသနှင့်မတရားသောလမ်းဖွင့်ကြသည်။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုန့်ပြန်သောယောက်ျား၏လိင်တံသည်စိုက်ထူနိုင်သော်လည်းနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်လည်းစိုက်ထူနိုင်သည်။ သင်အိပ်မက်နေသည့်ကာလအတွင်း REM (လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှု) ဟုခေါ်သောနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအိပ်မပျော်သည့်ကာလအဖြစ်လည်းစိုက်ထူနိုင်သည်။
လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ အမျိုးသားတစ် ဦး ၏လိင်တံ - အထူးသဖြင့်လူငယ်တစ် ဦး ၏လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲလည်းစိုက်ထူနိုင်သည်။ ဒီ "အလိုအလျောက်စိုက်ထူအဖြစ်လူသိများသည်။
ငါနောက်တဖန်ဒီအဆင့်တဆင့်သွားငါမှန်းဆ။ ငါငယ်ရွယ် (နှောင်းပိုင်းကသုံးဆယ်) မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါပေမဲ့ဒီနောက်တဖန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအထီး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုများသောအားဖြင့်ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းနှင့် 4-6 နံနက်န်းကျင်က၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာဆောကျ, မှေးကွိုအိပ်နေစဉ်အစောပိုင်းနံနက်ယံ၌၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာ
သင်အိပ်မက်မက်နေသောအရာနှင့်များသောအားဖြင့်ယောက်ျားများသည်သူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးညအချိန်တွင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း (စိုစွတ်သောအိပ်မက်) ကိုရရှိနိုင်သည်။
သငျသညျဆီးရန်လိုအပ်သောကွောငျ့အဘယ်သူမျှမကသင်သည်တစ်ခုစိုက်ထူမရကြဘူး။ အဆိုပါစိုက်ထူခြင်းနှင့်ဆီးရန်လိုအပ်ကြောင်းမှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ စဉ်းစား, သင်က Hard-ပေါ်တွင်သင်ဆီးဖို့လိုအပ်တိုင်းအချိန်ရပါသလဲ?
ခြောက်ဆယ်အနှစ်ထက်အသက်ကြီးပင် Non-REM အိပ်နေစဉ်သူတို့ကိုရှိစေခြင်းငှါပေမဲ့နံနက်စိုက်ထူ, Rapid မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှု (REM) အိပ်ပျော်ခြင်း (အများဆုံးအိပ်မက်မက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ) ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ရသောနည်းပညာပိုင်းညအချိန်စိုက်ထူကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ည REM အိပ်လေးကြားကာလခံစားရသည်။ အဆိုပါ Wee နာရီတွင်ဤအလိုအလျောက်စိုက်ထူ REM အိပ်နေစဉ်နှိုးဆွဖြစ်ကြောင်းတိကျသော neuroreflexes ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ နံနက်စိုက်ထူ 20-30 မိနစ်အသီးအသီးအဘို့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်ထိုညဉ့်နှုန်းငါးကဲ့သို့အများအပြား, ညအချိန်စိုက်ထူတဲ့စီးရီး၏အမြီးအဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ငါဒီနှိုးအကြိမ်ပေါင်းများစွာတညဉ့်ကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်ထင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းအဘို့ဤတွေ့ကြုံ, ဒါမှမဟုတ်တကယ်အစဉ်အဆက်ငါ gues ဘူးသူတစ်ဦးမှာ, loop တစ်ခုအဘို့ကိုယျခန်ဓာပစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါကယခုအကြှနျုပျကိုအများဆုံးညပြင်းထန်သောရရှိသွားတဲ့ကိုငါသိ၏။ ငါလအတွင်းဖြောင့်တဲ့ညဥ့်မှတဆင့်အိပ်ပျော်ကြပြီမဟုတ်။
လူအတော်များများစိုက်ထူရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအစေခံကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိထားမဟုတ်; သူတို့မှာလည်းလိင်တံမှတိုးပွားလာသောအသွေးကိုပေးဝေတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ပဲကျန်းမာလိင်တံကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ညအချိန်တွင်အများအပြားစိုက်ထူရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တဖန်ငါစကားလုံးကျန်းမာကြိုက်တယ်။ ငါ့ကိုတပြင်လုံးကိုအရာတွေအကြောင်းပိုကောင်းခံစားရစေသည်။ ငါထင်ထက်ပိုမိုငြိမ်းစေလျက်ငါမှန်းဆ။
Rapid Eye Movement (REM) အိပ်စက်ခြင်းအစီအစဉ်အပြီးတွင်နှိုးခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ သင်အိပ်မက်နေစဉ်အတွင်းလူအားလုံးနီးပါးသည် REM အိပ်ချိန်တွင်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာခက်ခဲတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုကနေမကြာခဏနိုးထလာတာပါ။ ဒါ့အပြင် Pee Horn လို့ခေါ်တဲ့ Pee Horn ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသင်တွေ့ရမှာပါ။ Pee Horn လိုမျိုးသင်ဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ pee နဲ့နိုးထလာပြီးရေချိုးခန်းကိုသွားတဲ့အခါမျက်စိထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိသွားပါတယ်။ လူတိုင်းကရတယ်။
သေးဤအမှုကိုပြုသောမဟုတ်ပါဘူး။ သော်လည်းသင်တို့ကိုနှိုးလိမ့်မယ်။ ဟားဟား။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါအတှေ့အကွုံမှ စတင်. ငါဘယ်အရာကိုကနေညာဘက်အကြောင်းကိုအသံ။ ငါသည်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်သော်လည်း hyper mode မှာဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားပြီထင်ပါတယ်။ ငါကအချို့သောအချိန်ကငြိမ်သက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိလုပ်ပါ။ ငါတကယ်ကျန်းမာ၏ဟောပြောချက်နှင့်တူ။ ငါဒါဤမျှကာလပတ်လုံးတက်သည် messed ပါပြီ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဒီစွဲလမ်းစိုက်ထူပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ သူများသည်ညဥ့်အချိန်စိုက်ထူကျန်းမာသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ ငါတကယ်ကဒီမတိုင်မီနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းညဥ့်အချိန်စိုက်ထူတယ်လျှင်ငါမသိရပါဘူး။ ကျွန်မအခုသူတို့ညဉ့်လုံးညစဉ်ညတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏။ ငါတော့ဘူးမကျေမနပ်နှိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်ပေမယ့်အခုကအကြောင်းအဖြစ်ဆိုးမခံစားရလိမ့်မည်။
အခြားသူတွေကဒီကိုသိရန်လိုလိမ့်မည်ထင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်မအကြီးအသေးစိတျထဲမှာသုတေသနခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာငါဒီကိုဖတ်ရှုယခုအချိန်တွင်ထိုသို့အားလုံးညာဘက်ငါကြုံတွေ့ခဲ့ရာကနေအသံပဲဖြစ်ပါတယ်။